सेना तैनाथ गरेर मात्र भारतसँग वार्ता, सुरक्षा प्रमुखज्यूहरु हो, लड्न तयार हुने कि ? — Imandarmedia.com
सेना तैनाथ गरेर मात्र भारतसँग वार्ता, सुरक्षा प्रमुखज्यूहरु हो, लड्न तयार हुने कि ?
काठमाडौँ। सेना तैनाथ गरेर मात्र भारतसँग वार्ता, सुरक्षा प्रमुखज्यूहरु हो, लड्न तयार हुने कि ? नेपाल र भारतका बीचको घनिष्ठ सम्बन्धको इतिहासमा विशाल देशका सेनातपतिले सानो मित्र देशलाई होच्याएर चीनतर्फ घुचेटेर बोलेको यो पहिलाे दुखद् तर अक्षम्य घटना हो।
भारतीय सेनापति मनोज नरवानेले नेपाल र भारतका सेनाको सौहार्दताको इतिहासमै लज्जाजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मित्रवत अभियानका नाममा साना छिमेकी प्रति जाहिलाग्ने, चिड्याउने र सताउने दुश्कर्मले भारतलाई किमार्थ फाइदा गर्ने छैन।
प्रधानमन्त्री मोदीले ती भिलेनहरुको पहिचान र साइजमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनेता हुने विकल्प रोज्नु बान्छनीय हुने छ। मानिसको संख्या र आकारले होइन देशभक्ति, समर्पण भाव त्याग र बलिदानीबाट जस्तोसुकै भिमकाय दुश्मनलाई परास्त गर्न सकिन्छ। वीर गोर्खाली सक्कली पहिचान त्यही होर त्यसको रक्षा गरौं।
यो कसको षड्यन्त्र हो ? देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा विभिन्न शक्तिबाट गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा देशका मुख्य सुरक्षाका अंग र सुरक्षाकर्मीहरुको लागि ‘मोराल डाउन’ गराउने खतरनाक खेल पनि भएको छ।
देशलाई आपत्ति आइपर्दाको यो महामारीमा फ्रण्टलाइनमा खटिएका र भाइरससँग सबैभन्दा पहिले सम्र्कमा आउने स्पष्ट जोखिम बोकेका सुरक्षाकर्मी, संरक्षणकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री पीपीई, मास्क, पन्जा उपलब्ध गराउन नसक्दा उनीहरुको जीवन रक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिएन।
‘मोराल डाउन’ मात्र होइन, सरकार कुन हदसम्म असंवेदनशील तथा लोभी पापी र दरिद्र छ भन्ने तथ्य उजागर हुँदा सुरक्षाकर्मीको मन भाच्चिएको छ स्थायीरुपमा। खुल्ला सीमाना अनुगमन र नियन्त्रणको लागि खुल्ला आकास तथा खाली पेटमा अहोरात्र खटिएर बहादुरी र त्याग प्रदर्शन गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीमाथि सीमा पारिका रोटी बेटीको नातेदारले जुत्ता चप्पल, ढुङ्गामुढा आक्रमण गरेका छन्।
सर्बत्र निरिहता किन होला ? राष्ट्रिय एकताको साङ्लो टुटेको छ। खिया लागेर मक्किएको छ। र भित्र भित्र धेरै टुक्रामा विभक्त छ। राष्ट्रभक्ति परदेशभक्तिमा परिणत भएको छ। कसरी नजिक र विश्वाशिलो हुने र परदेशीको लगानी र मायाको बलमा स्वदेशी राष्ट्रभक्तलाई तह लगाउने कोर्रा लगाउने, पदच्युत गर्ने र दण्डित गर्ने यो जात्रामा हामी सरिक भयों तल्लीन भयौं। मातृभूमि एजेण्टहरुको यस्तो बजार भयो। थरि थरिका एजेण्टहरु फ्यालाफ्याल।
सक्नुहुन्न आफू र आफ्नो संगठनलाई आराजनितिक, तटस्थ, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवकको संस्था भनेर प्रमाणित गरेर देखाउन सघाउनुहोस्। तर परदेशमुखी राजनितिसँग लतारिएर आफू पनि फोहोर र दुर्गन्धको डंगुरमा हाम नफाल्नुहोस्।
इतिहास र भावी सन्ततीले सत्तोसराप गर्नेछन्। एउटा पराधीन प्रान्तप्रमुख हुनुभन्दा स्वाधीन सार्वभौम अखण्ड मुलुकको सिपाही हुनु हजार गुना गर्वको कुरा हो।भारत र चीन दुबै सेनाका सेनाध्यक्षहरुलाई मानार्थ सेनापति लिन्छन भने दिउँ तर हामी कसैको सेनापति नबनौं। यो दास र मगन्ते प्रथा बन्द गरौं।
यो ग्राउण्ड अफ ट्याकिटकल इम्पार्टेेन्स (जिटिआइ) होइन। भाइटल ग्राउण्ड हो। सामरिक महत्वको विशेष संवेदनशील क्षेत्र हो। मिसन धोकामा चीनसमेत सामेल भएको छ। भीमकाय मुलुकहरुसँग लड्न र घुडा टेकाउन पाउनु सानो भू–परिवेष्ठित मुलुकको लागि गर्व र अहोभाग्यको कुरा हो। साभार डिसी नेपालबाट।